Shirkadda Etihad Airways ayaa duulimaadyo ka bilaabeysa magaalada Vienna ee dalka Austria | Wararka Duulimaadyada
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Shirkadda Etihad Airways ayaa duulimaadyo ka bilaabeysa magaalada Vienna ee dalka Austria
Adeeggan cusub ayaa si ku habboon waqtigiisa loogu talagalay inuu yimaado subaxa hore ee Vienna si loo siiyo safarrada u dhexeeya UAE iyo Austria meel fasax ah oo ku habboon dhamaadka toddobaadkan.
Etihad Airways ayaa ku dhawaaqeysa duulimaadyo cusub oo Vienna ah xagaagan.
Adeeggu wuxuu shaqeyn doonaa laba jeer usbuucii iyadoo la adeegsanayo Boeing 787 Dreamliner laga bilaabo 18 Luulyo 2021.
Austria waxay hada ufurantahay muwaadiniinta iyo dadka dagan Austria iyo dadka degan wadamada xubnaha ka ah Schengen, ganacsatada safarka ah iyo ardayda.
Etihad Airways, shirkadda diyaaradaha ee qaranka ee UAE, ayaa duulimaadyo ka bilaabi doonta Vienna xagaagan. Adeeggu wuxuu shaqeyn doonaa laba jeer usbuucii iyadoo la adeegsanayo Boeing 787 Dreamliner laga bilaabo 18 Luulyo 2021.
Socotada booqanaya Vienna waxay ku raaxeysan doonaan dhaqan qarniyo hore soo jiray iyo muuqaal qurux badan. Caasimadda Austria waxaa si isdaba joog ah loogu codeeyey magaalada adduunka ugu nolosha fiican.
Si loo fududeeyo khibrada safarka loona helo nabad galyo dheeri ah, Etihad Airways dhawaan la bilaabay Verified to Fly, taasoo u oggolaanaysa martida inay ansixiyaan dukumiintiyada safarka ee ay ku qoran yihiin 'Covid-19' ka hor inta aysan garoonka diyaaradaha imaan.
Socotada isticmaala Verified to Fly waxay ku raaxeysan karaan baaritaanka degdegga ah ee garoonka diyaaradaha iyagoo aadaya Verified to Fly miiska u heellan si ay khibrad dhaqso leh oo ka fudud u helaan.
Duulimaadka, ka imaadka, iyo marinka Abu Dhabi waxaa taageera shirkadda faya-dhowrka ee barnaamijka fayadhowrka iyo nabadgelyada ee Etihad Wellness, oo hubiya heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda in lagu ilaaliyo heer kasta oo safarka macaamiisha ah.
Etihad Airways waa markabkii labaad ee xambaara calanka Imaaraatka Carabta. Xafiiskeeda guud wuxuu ku yaal Khalifa City, Abu Dhabi, oo u dhow Madaarka Caalamiga ah ee Abu Dhabi. Etihad waxay shaqadeeda bilawday Nofeembar 2003. Waa diyaaradda labaad ee ugu ballaadhan Imaaraatka marka laga reebo Emirates.